Pokémon Rumble Rush malitere na Australia na mmalite "nro" | Gam akporosis
Pokémon Rumble Rush na-achọ ịbịaru gam akporo, dịlarị na Australia
Pokémon Rumble ga-eru Android ịmara na ọ dị ugbu a maka nbudata na Australia n'efu. Aha ohuru maka gam akporo nke n’enwe olile anya inweta oke ahia n’etiti ndi n’enwe obi uto ma nwee Pokémon Go.
I kwesiri ima na Pokémon Rumble Rush ewepụtalarị na Japan, n'agbanyeghị na aha ọzọ, kpomkwem Pokémon Scramble SP. Ya mere, ọ ga - abụ obere oge tupu ịmalite ọhụụ ọhụụ na otu n'ime sagas kachasị ewu ewu.
Ma nke ahụ dị ugbu a na mmalite dị nro na Australia, iji mechie egwuregwu ahụ ma kpochapụ obere ahụhụ ndị ahụ nwere ike ime ka ahụmịhe egwuregwu ka njọ, ọ pụtara na n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enweta ya na Google Play Store na mba ụwa.
Egwuregwu nke ga-agbaso usoro enyere jiri nkà ma jikwaa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "aka" anyị Pokémon ka ọ na-aga n'ihu na ihuenyo. E nwekwara nke inwe ike ịnakọta ma melite Pokémon ọhụrụ anyị na-achụ nta, n'ihi ya, anyị ga-eche ihu otu n'ime isi ala nke Pokémon Rumble Rush.
A ọhụrụ freemium aha maka ihe ọ bụla gam akporo ngwaọrụ 4.4 ma ọ bụ karịa na-enye ohere zuo nke micropayments site na obere ruo na ụfọdụ ndị ka elu. Obere ihe banyere egwuregwu Pokémon ọhụrụ nke ekwuputabeghị na akụkụ ndị a na nke anyị amabeghị ụbọchị mmalite ya.
Na ọ dịlarị na Australia nwere ike ịpụta na anyị nwere ya obere oge ma ọ bụ na ọ ga-ewe izu ole na ole iji kwado ya ịmalite mba ụwa. Thatbụ na ọ nwere ike, anyị nweres ọzọ pokemon egwuregwu dị njikere ijere tebụl ozi ka anyị na-eche nke ọzọ maka 2020 ma nke ahụ ga-ewere nlebara anya karịa nke a. A saga na-aga n'ihu na-emelite na ọhụrụ aha ya ka ọ ghara ida coba na succulent ahịa nke mobile egwuregwu.
Egwuregwu Pokémon Rumble Rush
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon Rumble Rush na-achọ ịbịaru gam akporo, dịlarị na Australia
3 Ndi ozo nke ES File Explorer n’efu